७७ वर्षीय बृद्धलाई परालमा सु’ताएर स्लाइन दिदैँ, यस्तो छ अवस्था ! – Sandesh Press
७७ वर्षीय बृद्धलाई परालमा सु’ताएर स्लाइन दिदैँ, यस्तो छ अवस्था !
November 27, 2020 155
संखुवासभा । भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका ३ खार्तम्छा चिचिला निवासी ७७ वर्षीय रामबहादुर राईको परालको ओछ्यानमा राखेर स्लाइन पानी दिइएको तस्विर भाइरल भयो । कतिले उक्त तस्विरलाई बनावटी पनि भने । खार्तम्छा निवासी ७७ बर्षिय राईलाई परालमा सुताएर स्लाइन पानी दिइएको झु’टो हैन साँचो हो । उनी दशैं अगाडिदेखि बिरामी थिए । उनको घरमा उपचारका लागि ओछ्याउने एउटा तन्ना पनि छैन ।
मंसिरको जाडोमा उनी सुत्ने ठाँउमा पराल बाहेक केबिि थिएन । उनी सामान्य खालको खास्टोको भरमा रात कटाउन विवस छन् । परालमै राखेर स्लाइन पानी दिएर उपचार गरेका राईको श्रीमतीको मृत्यु केही बर्ष पहिलेनै भइसकेको छ । अहिले उनको एक मात्र छोरा छन् सुस्त म’नस्थिति अवस्थाका । ७७ बर्षिय राई बस्ने सामान्य कटेरो मात्रै छ । उनी कर्तब्य ज्या’न मु’द्दामा १७ बर्ष का’रा गार बसेर निस्किएका हुन् ।
नगरले निशुल्ल घर बनाइ दिने : जीर्ण घरमा बस्दै ७७ बर्षिय राईलाई षडानन्द नगरपालिकाले नयाँ बनाइ दिने भएको छ । उनलाई नगरले चाडै निशुल्क घरको पनि ब्यवस्था गरेर नयाँ घरमा सार्ने षडानन्द नगर पालिकाकी उपमेयर मेरिका राईले जानकारी दिएकी छन् । नगरपालिकाले ७७ बर्षिय बृद्धलाई नयाँ घरमा राख्न खार्तम्छाकै स्थानियलाई घर बनाउने जिम्मा दिएको उपमेयर राईले जानकारी बताइन् ।
सामाजिक सञ्जालमा ७७ वर्षीय बृद्ध राईको परालमा राखेर स्लाइन पानी दिइरहेको फोटो देखेपछि अवस्था बुझ्न षडानन्द नगर पालिकाका मेयर बीरबल राई र मेरिका राई बुधबार खार्तम्छा पुगेका थिए । स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन बुधबार साँझ खार्तम्छाको चिचिला पुगेको षडानन्द नगरपालिकाकी उपमेयर मेरिका राईले जानकारी दिएकी छन् । ‘सामाजिक सञ्जालमा पराल माथि राखेर स्लाइन पानी दिइरहेको फोटो बनावटी नभइ बास्तविक फोटो हो ।’
उपमेयर राईले भनिन् । जाडो मौसममा ७७ वर्षीय बृद्ध त्यसमा पनि विरामी भएको अवस्थामा परालमा सुतेको देखेपछि मेयर र स्वास्थ्यकर्मीको टोली खा र्तम्छा पुगेको उपमेयर राईले जानकारी दिइन् । नगरपालिकाले उनलाई खाद्यान्य,लत्ताकपडा सहयोग गरेको छ । अहिले बृद्ध राईको अवस्था स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको खार्तम्छा स्वास्थ्य चौकीले जनाएको छ । ७७ बर्षिय वृद्ध राईलाई खार्तम्छा स्वास्थ्य चौकीको निगरानीमा छिमेकी कटेरोमा सारेर उपचार गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
Prevयो हप्ता यी ४ राशिको लागि रहनेछ अत्यन्त शुभ, मिल्नेछ भरपूर लाभ !
Nextजोडोमा महामारी भयावह बन्दै, दैनिक ६ लाखका दरले कोरोना संक्रमित बढ्न थाले